Hosodoko : hampiranty any Mahajanga i R. Nary Arthur | NewsMada
Hosodoko : hampiranty any Mahajanga i R. Nary Arthur
Raha mangingina ny eto an-dRenivohitra, mandritra izao fotoam-pialan-tsasatra izao, tsy toy izany kosa ny any amoron-tsiraka any, indrindra any amin’ireo toerana tian’ny mpiala sasatra. Manaraka azy ireo any koa ny mpanakanto sy ireo hetsika ara-kolontsaina samihafa fa tsy ny mozika ihany.
Nisafidy ny ho any Mahajanga, ohatra, i R. Nary Arthur, anisan’ireo dimbin’ny andrarezina amin’ny tontolon’ny hosodoko, mandritra io volana septambra io. Manomboka ny 2 septambra, hiranty ao amin’ny Alliance française ao an-dRenivohitr’i Boeny ao, ny « Hatsaran’i Madagasikara ».
Miisa 20 eo ny tabilao miandry ny mpitsidika amin’io, izay natao tamin’ny lokorano avokoa. Mibahan-toerana ny sary vita amin’ny loko isan-karazany raha vitsivitsy ny miloko mainty sy fotsy, araka ny fanazavan’ity mpanakanto ity. Nomarihiny fa ireo sanganasany nentiny nisolo tena an’i Madagasikara tany Nantes-Frantsa, tamin’ny taon-dasa, ireo harantiny ireto.
Vinavinan’i R. Nary Arthur ny hitondra izao hetsika izao manerana ireo Alliances françaises any amin’ny faritra rehetra any, mialoha ny hanamarihany ny faha-15 taona nilomanosany ao amin’ny tontolon’ny hosodoko.